အခြေအနေတိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံး ခွေးအနှီး | ခွေးကမ္ဘာ
အခြေအနေတိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံး ခွေးအနှီး
နတ် Cerezo | 22/11/2021 11:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 22/11/2021 11:31 | ခွေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ခွေးအနှီးများသည် မထိန်းနိုင်သော သို့မဟုတ် အသက်ကြီးခြင်းကဲ့သို့သော အရာများကို ကုသရန် အလွန်တိကျသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ဒါပေမယ့်လည်း အိမ်သာတက်ဖို့ စောင့်ဆိုင်းဖို့နဲ့ အိမ်အပြင်မထွက်ဖို့ ခွေးလေးတွေကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့လည်း မြေခွေးတွေကို ပစ်ချလိုက်ပါ။
ဤဆောင်းပါး၌ ခွေးများအတွက် မတူညီသော အနှီးအမျိုးအစားများအပြင် ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုများနှင့် ၎င်းတို့ကို ရွေးချယ်အသုံးပြုသည့်အခါတွင် အကြံပြုချက်အချို့ကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။. ယင်းတို့သည် တူညီသောလက္ခဏာများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အနှီးများဖြစ်သည်။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အနံ့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှစ်သိမ့် မင်းသိပြီးသားဖြစ်ပေမယ့်သင့်ခွေးရဲ့ခန္ဓာဗေဒနဲ့ကိုက်ညီတယ်
Trixie အနှီးများအတွက် ...
Amazon Basics ခွေးထီး...
ထွက်! ခွေးအနှီးများ ...
ရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းချက် Diapers ...
SMELL & SMILE Diapers...
1 ခွေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံး အနှီး
1.1 ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ အနှီး ၃ ထုပ်
1.2 ပြန်သုံးနိုင်သော ခွေးအထီးအနှီး
1.3 အမျိုးသားများအတွက် တစ်ခါသုံး အနှီး
1.4 Trixie တစ်ခါသုံး Diaper Pack
1.5 အမျိုးသမီးအတွက် လျှော်လို့ရတဲ့ အနှီး
1.6 အမျိုးသမီးများအတွက် အထူးစုပ်ယူနိုင်သော အနှီး
1.7 ခွေးများအတွက် အောက်ခံအကာများ
2 ခွေးအနှီးက ဘာအတွက်လဲ။
2.4 မိန်းမတွေက အပူရှိန်နဲ့
4 အနှီးပေါ်တင်တဲ့အခါ အကြံပြုချက်
ခွေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံး အနှီး
ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ အနှီး ၃ ထုပ်
PET MAGASIN အနှီးများ ...
ဤအထုပ်နှင့်အတူ ပြန်သုံးနိုင်သော ခွေးအနှီးသုံးမျိုးတွင် ကူရှင်၊ ကော်ဇောနှင့် ဆိုဖာများတွင် မတော်တဆမှုများနှင့် ကြောက်စရာများကို ရှောင်ရှားရန် လိုအပ်သည်. ၎င်းတို့ကို အလွန်စုပ်ယူနိုင်သော အထည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ၎င်းတို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ခါးတွင် elastic band တစ်ခုပါရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အပူရှိန်ရှိ ခွေးမများအတွက် အထူးရည်ရွယ်သည် (ဓမ္မတာလာစဉ်) နှင့် အရွယ်အစားနှင့် မော်ဒယ်များစွာရှိသော်လည်း၊ အပြင်းထန်ဆုံးမှ အထူးခြားဆုံးအထိ (ပုံဆွဲသူများသည် အလွန်ချစ်စရာကောင်းသည်)။
မှတ်ချက်များတွင် ၎င်းတို့သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ ဆီးအမြောက်အများ မဟုတ်ဘဲ ဆုံးရှုံးမှုကိုသာ ခံယူပါ။.
PET MAGASIN အတွက်အနှီးများ ...
ဤအနှီးများသည် အမျိုးသမီးများအတွက် ဒီဇိုင်းထွင်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏ ဖောင်းနေသော အစိတ်အပိုင်းများကို ဖုံးအုပ်ထားသည့် ခါးပတ်တစ်မျိုးကဲ့သို့ တွဲဆက်ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သိသိသာသာ၊ ၎င်းတို့သည် ဝမ်းမထိန်းနိုင်ဘဲ ဝမ်းသွားတတ်သည် (ခွေးများသည် များသောအားဖြင့် ဝမ်းမထိန်းနိုင်ဘဲ) ဆီးသွားရုံပင်။ ၎င်းတို့သည် အလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ၎င်းတို့ကို velcro ဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်ပြီး ဆီးကို ထိန်းသိမ်းရန် အထည်နှစ်လွှာပါရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့ကို အရွယ်အစားနှင့် အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။
အမျိုးသားများအတွက် တစ်ခါသုံး အနှီး
Amazon Basics - Diaper ...
Amazon Basics သည် ခွေးထီးများအတွက် တစ်ခါသုံးအနှီး 30 ထုပ်ကဲ့သို့သော အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ကုန်ပစ္စည်းများ အမြဲရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ချိန်ညှိနိုင်သော်လည်း၊ သင်သည် အကြံပြုထားသော အတိုင်းအတာများနှင့် အရွယ်အစားများကို ဇယားတွင်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် မှန်ကန်သောအရွယ်အစားကို သေချာစေရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီထုတ်ကုန်ရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ ခွေးကိုက်ခံရတဲ့အခါ အရောင်ပြောင်းတာကြောင့် ပြောင်းချိန်ရောက်ရင် ချက်ချင်းသိနိုင်ပါတယ်။
Trixie တစ်ခါသုံး Diaper Pack
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက် အထူးပြုထားသည့် ဂျာမန်အမှတ်တံဆိပ် Trixie သည် သင့်အား ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော တစ်ခါသုံးအနှီးထုပ်များကို သင့်အား ပေးဆောင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို တိရစ္ဆာန်ဆေးဆရာ၏အကူအညီဖြင့် တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့တွင် သင့်ခွေး၏ခါးနှင့် အတတ်နိုင်ဆုံး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော elastic band တစ်ခုရှိသည်။အရွယ်အစားများစွာရှိခြင်းအပြင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အလွန်ပေါများသောဆီးအတွက်အသုံးပြုသည်။
အမျိုးသမီးအတွက် လျှော်လို့ရတဲ့ အနှီး
ခွေးများအတွက် အနှီး၏နောက်ထပ်ဥပမာ၊ ဤအခြေအနေတွင် မထိန်းနိုင်သောရောဂါခံစားရသော သို့မဟုတ် ရာသီလာဖူးသော အမျိုးသမီးများ။ ဤအထုပ်တွင် လက်ဖြင့် သို့မဟုတ် စက်ဖြင့်လျှော်နိုင်သော အနှီးသုံးမျိုးပါရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင် elastic band နှင့် velcro ပါရှိသောကြောင့် အလွန်လိုက်ဖက်ပါသည်။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် အမြီးကို တတ်နိုင်သမျှ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင် ဖောက်ပေးသော အပေါက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ဤထုတ်ကုန်ကို မော်ဒယ်များနှင့် အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
အမျိုးသမီးများအတွက် အထူးစုပ်ယူနိုင်သော အနှီး
ခွေးမထိန်းနိုင်သော ပြဿနာရှိသူများအတွက် နှင့်ဤ Trixie အမှတ်တံဆိပ် တစ်ခါသုံး အနှီးများသည် စံပြဖြစ်သည်။. အချို့သောမှတ်ချက်များက အရွယ်အစားသည် အနည်းငယ်မျှတသည်ဟု ဆိုကြသော်လည်း၊ ၎င်းသည် တိရစ္ဆာန်ကို ခြောက်သွေ့စေပြီး စိမ့်ဝင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ၎င်း၏ ကြီးမားသောစုပ်ယူမှုစွမ်းအားကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ ၎င်းတို့တွင် အမြီးဖြတ်သွားကာ ပိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေမည့် အပေါက်တစ်ခု ရှိသည်- ဆီးသည် ထိုနေရာမှ လွတ်မသွားစေရန်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ချိန်ညှိရန်အတွက် ကော်တိပ်အနည်းငယ်ဖြင့် ကျန်နေသော အပေါက်နှစ်ခုကို ကော်(သတိမထားမိပါနှင့်။ ဆံပင်ကိုဖမ်းရန်။)
Arquivet စီးပွားရေးအထုပ် ...
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ diaper ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပေမယ့် အရမ်းဆင်တူတဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခု- ရေစိမ်ခံပါ။ သင့်ခွေးက သူ့ကိုယ်သူ သက်သာရာရစေဖို့ ကြမ်းပြင်မှာ ထားထားတဲ့ တစ်ခါသုံး အနှီးနဲ့တူတယ်။ အပေါ်က အားလုံးကို မထားခဲ့ပါနဲ့။ ၎င်းသည် အလွန်ကောင်းစွာ စုပ်ယူနိုင်ရုံသာမက၊ ၎င်းတွင် ကောင်းမွန်သောအရွယ်အစားနှင့် ကော်လေးခုပါရှိပြီး ၎င်းကို မြေပြင်ပေါ်တွင် ပြုပြင်နိုင်ပြီး ရွေ့လျားခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သောကြောင့် ပိုမိုကြောက်လန့်စရာများကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ငါတို့ပြောသလိုပဲ၊ တစ်ထုပ်စီမှာ အလုံး 30 ရှိတယ်။
ခွေးတွေအတွက် အနှီးအသုံးပြုပုံက ဘာလဲဆိုတာ ပြောပြဖို့ မလိုအပ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ် အဲဒါက ပထမအကြိမ် ခွေးအဖော်တွေအတွက် အသုံးဝင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သိဖို့ အသုံးဝင်နိုင်ပေမယ့်၊ ဒါပေမဲ့ ကိစ္စတိုင်း၊ သင့်ခွေးသည် ယိုစိမ့်နေသည်ကိုတွေ့ပါက အကောင်းဆုံးကုသမှုကိုခံယူရန် သေချာစေရန် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်ထံ ကြိုတင်အကြောင်းကြားရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။.
အနှီးတွေက ဝန်နှင့်အနံ့များကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သူတို့အရွယ်အစား S, L နှင့် XL အရွယ်အစားကြောင့်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
သား ultra စုပ်ယူ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်လုံးအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှိသည် အမျိုးသမီးများ၏အပူအတွက်စံပြဖြစ်သည်။
ဤအနှီးတစ်ခုချိန်ညှိပုံသဏ္featureာန်ပါရှိပါတယ် ယိုဖိတ်မှုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကော်တိပ်နှင့်အတူခါးမှာ။ ၎င်း၏အလယ်ဗဟိုသည်လုံးဝစုပ်ယူပြီးတိရိစ္ဆာန်များကိုမနှောင့်ယှက်ဘဲရှူရှိုက်နိုင်သောအနားများရှိသည်။
ပျမ်းမျှ၏ ခွေးနှီး၏ကြာချိန်ခြောက်လမှရှစ်နာရီဖြစ်ပါတယ် အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်အရသိရသည်။ တစ်ခါသုံးနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောမော်ဒယ်များရှိပါသည်။ အဆုံးတွင် ၀ န်ထုပ်များကိုအတွင်းပိုင်းထားရှိသည့်ဆေးကြောခြင်းသို့မဟုတ်အထည်များဖြင့်ရရှိသည်။
ပထမဆုံးအနေဖြင့်သင့်ခွေးကိုအနှီးတစ်ချောင်းထဲထည့်သွင်းရန်၎င်းသည်ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုခုခံခြင်းရှိမရှိပေါ် မူတည်၍ အနံ့ခံရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဒါကြောင့်ပဲ ဒီပထမ ဦး ဆုံးအနှီးaလုပ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ် သာယာသောအတွေ့အကြုံ။ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုခေါ်။ သူနှင့်အတူအလိုအလျောက်ကစားပါ၊ သူ့ကိုပစ္စည်းပွားများစေရန်နှင့်သူ၏နောက်ကျောခြေထောက်များကိုတင်ရန်ခွင့်ပြုပါ၊ ထို့နောက်သူအားဘေးဒဏ်များကိုဘေးတိုက်မှနူးညံ့စွာချိန်ညှိပါ။
အစတွင်သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိအရာ ၀ တ္ထုများ၏ခံစားမှုကြောင့်ဂရုတစိုက်လမ်းလျှောက်ပါလိမ့်မည် တဖြည်းဖြည်းနှင့်သူသည်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်.
အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ဝေဒနာတွေ ပေါ်လာပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်နေပြီဖြစ်သော ခွေးများသည် ဆီးယိုစိမ့်ခြင်းကို ခံစားရနိုင်ပြီး ၎င်းတို့သည် သက်သာရာရရန် အပြင်ထွက်ရန် အလွန်ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် ကောင်းမွန်စွာ မထိန်းချုပ်နိုင်သောကြောင့် သို့မဟုတ် အခြားသော အသက်အရွယ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းများကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဆီးမကျခြင်း အသက်ကြီးသော ခွေးများတွင် ပေါ်ရုံသာမကဘဲ ခွေးအမျိုးအစားအားလုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်သော ရောဂါလက္ခဏာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ဥပမာ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာ၊ ဆီးချိုရောဂါ... ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ ခွေးပေါ် အနှီးမတင်ပါနဲ့၊ ဆီးမထိန်းနိုင်ဖြစ်တာက ဘာအတွက်ကြောင့်လဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်ဆီ ခေါ်သွားပါ။
ခွေးတွေ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ အနှီးတွေက လိုအပ်သလို၊ သူတို့ဘဝအစမှာ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည် ဆီးယိုစိမ့်ခြင်းနှင့် ယားယံခြင်းတို့ကို ထိန်းထားနိုင်သည်အထိ လေ့ကျင့်နေစဉ် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ခွေးနှင့်ခွေးအကြားခန္ဓာဗေဒကွဲပြားခြားနားမှုပေးထားသည် အနှီးတွေ နှစ် ဦး စလုံးအဘို့အခန္ဓာဗေဒချိန်ညှိခွေးများတွင်မူခွေးများအပေါ်တွင် ကပ်၍ အနားစွန်းရှိခွေးများ၏ခါးပတ်အကျယ်အ ၀ န်းအတိုင်းအတာကိုတိုး။ လျှော့ချနိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်မူ၎င်းသည် ပို၍ လက်တွေ့ကျပြီးအဆင်ပြေသည်။
ခွေးပေါက်စကလေးများအတွက်မူ၎င်းတို့သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် သူတို့အိမ်မှာသူတို့ကိုယ်သူတို့သက်သာရာမှစတင်သောအခါ, အနှီးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ယိုဖိတ်မှုကိုကာကွယ်ပေးပြီးလမ်းလျှောက်ရန်အချိန်မရောက်မှီထိန်းချုပ်ရန်အလွယ်တကူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။
အနှီးများသည် အပူရှိန်တွင် အမျိုးသမီးများ အိမ်တစ်အိမ်လုံးတွင် အစွန်းအထင်းများ မကျန်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ခွေးမွှားမွှားမွှားမွေးထားသော ခွေးများအတွက် ဘုံဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Chihuahua, Labrador (သို့) Maltese ခွေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့အဘို့အခွေးနှီးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်ဟာခွေးပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအနှီးတွေဘယ်လောက်ကုန်ကျတယ်၊ ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်၊ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ် သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အမှတ်တံဆိပ်, ဖောက်နှင့်အရွယ်အစား။
သင့်ခွေးရဲ့အရွယ်အစား ၏မော်ဒယ်ကိုရှာဖွေဖို့အရေးကြီးတယ် သူ့ကိုကိုက်ညီသောသင့်တော်သောအနှီး။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခါးကိုတိုင်းတာပြီးသင့်တော်တဲ့အနှီးညွှန်ကြားချက်ကိုကိုးကားပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ကြီးမားသောခွေးအနှီးကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက L အရွယ်အစားရှိသောခွေးအနှီးကိုသင်လျင်မြန်စွာရွေးချယ်နိုင်သည်။
ခွေး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်သည် ၄ ​​င်း၏လိင်အရကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်သင်၏ခွေး၏လိင် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး) ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ရွေးပါ အကောင်းဆုံးကိုက်ညီတဲ့အနှီး။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စတိုးဆိုင်များသည်ခွေးများအတွက်အနှီးအမျိုးမျိုးပေးသည်။
စျေးကွက်ထဲမှာ ခွေးများအတွက် အနှီးအမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်အရ ပိုကောင်း သို့မဟုတ် ပိုဆိုးနိုင်သည်။
အ တစ်ခါသုံးအနှီး ၎င်းတို့သည် အတန်ငယ် စျေးသက်သာသော်လည်း ၎င်းတို့သည် တစ်ကြိမ်တည်း အသုံးပြုသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို များစွာထိခိုက်စေပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင့်ခွေးသည် အချိန်တိုအတွင်း အနှီးဝတ်ရန် ပြဿနာရှိနေပါက၊ ၎င်းတို့ကို စဉ်းစားရန် ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။
အ လျှော်နိုင်သော အနှီးများ ၎င်းတို့ကို အထည်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး လျှော်ဖွပ်၍ရနိုင်သော၊ လျှော်ဖို့သတိထားရမှာက ပျင်းစရာကောင်းပြီး တစ်ခါသုံးဆေးတွေထက် အတန်ငယ် ပိုစျေးကြီးပေမယ့်၊ အမှန်တရားကတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပိုကောင်းပြီး ရေရှည်မှာ စျေးပိုသက်သာတာမို့၊ အကြိမ်များစွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ရေရှည်အနှီးလိုအပ်သော ခွေးများအတွက် စံပြဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကိုသူတို့ခံနိုင်ရည်မရှိစေရန်ကာကွယ်ပေးသောအနှီးများကိုရှာဖွေနေပါက၎င်းကိုသင်ရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် ဘောင်းဘီမော်ဒယ်များ ကြောင်းလှပသောလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်ပျော့ပျောင်းသော။
ဤပုံစံသည်ခွေးငယ်များအသုံးပြုသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်သူတို့ကောင်းစွာ fit နှင့်၎င်းတို့၏ပါးလွှာသောခြေထောက်ပေါ်ယိုဖိတ်တားဆီးအဖြစ်။ သင်၏ခွေးသည်ဆီး၌ဆီးသွားခြင်းကိုမတားဆီးဘဲနေရာတိုင်း၌ဆီးသွားမည်ကိုသတိရပါ။ ထို့ကြောင့်သူသည်ဤနှီးကိုအသုံးပြုရမည်။
ဒီမော်ဒယ်၏အထူးရှိပါတယ် အလွန်ပျော့ပျောင်းသောအထည်နှင့်လုပ်ပါ သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မှအကောင်းဆုံးနှစ်သိမ့်ပူဇော်ရန်။ ၎င်း၏နူးညံ့ပျော့ပြောင်းမှုအပြင်အရည်အသွေးနှင့်လက်တွေ့ကျမှုတို့ကြောင့်၎င်း၏ကောင်းမွန်သောပံ့ပိုးမှုကြောင့်သင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ ဒီဟာကမင်းရှာနေတဲ့ပုံစံဖြစ်မယ်ဆိုရင်သင် ၀ ယ်နိုင်ပါတယ် ဒီမှာ.
မပူဆွေးသောခွေးတစ်ကောင်သို့မဟုတ်အပူရှိသည့်ခွေးတစ်ကောင်သည်ဤတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးဘောင်းဘီများထက်မည်သည့်အရာမျှပိုကောင်းမည်မဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ဒီ panties ကိုတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းစွာအသုံးပြုခြင်းကသင့်အိမ်ကိုကာကွယ်နိုင်တယ်။ သင်၏ဆိုဖာ၊ ကြမ်းပြင်သို့မဟုတ်ကူရှင်ဖြစ်ပါစေ။
ဝတ်ဆင်ရန်သင့်ခွေးသည်၎င်း၏နူးညံ့ပျော့ပျောင်းမှုကြောင့်ချက်ချင်းမွေးစားလိမ့်မည်။ ဤအ panties ၏အဓိကအားသာချက်သူတို့ရဲ့ဖြစ်ပါတယ် ပိုကောင်းတဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကမ်းလှမ်းသောအမြန်ပိတ်ပစ်။
သင်၏ခွေးအားသင်အသုံးပြုရန်မကြောက်ရွံ့ရန်၊ မကြောက်ရွံ့ရန်တိုက်တွန်းရန်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် မှစ၍ သင်ပြုသည့်အတိုင်းအတာအထိအလွယ်တကူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်နှစ်သိမ့်မှုများစွာခံစားရနိုင်သည်။
အရွယ်အစား သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အ ၀ န်းအ ၀ န်း၏အတိုင်းအတာနှင့်အညီညှိယူပါ၎င်းသည် S, ML သို့မဟုတ် XL ဖြစ်နိုင်သည်။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၎င်းတို့သည်ခမ်းနားထည်ဝါသော panties များဖြစ်ပြီးသင့်ကိုစိတ်မပျက်စေနိုင်ပြီးသင်ကသူတို့ကို နှိပ်၍ အလွယ်တကူရွေးချယ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
အဆိုပါအနှီးစျေးကွက်လည်းဆည်းကပ်ခဲ့သည် ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပိုနှစ်သက်သောပိုပြီးမြင့်မြတ်သောပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်း ပတ်ဝန်းကျင် velcro ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကြောင့်အနှီးများသည်ဈေးချိုသည်။
မှတ်သားထားသင့်သည်မှာကလေးတစ် ဦး သည်သူ့ဘဝတွင်အနှီး ၁၀၀၀ ကျော်အသုံးပြုသည်ကိုသတိရသင့်သည်။ သဘာဝနေရာများထဲသို့ပစ်ချသည့်ပစ္စည်းအရေအတွက်သိသိသာသာတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
ကြောင်းသဘောမျိုး၌ ၎င်းကိုဂေဟဗေဒအနှီးများအသုံးပြုခြင်းအပြင်အကြံပြုပါသည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သောကြောင့်ဆေးကြောနိုင်သောအနှီးများ။ ဒီအနှီးတွေကအရွယ်အစား S၊ ပန်းရောင်၊ အပြာရောင်တွေရှိပြီးသင်တွေ့နိုင်တယ် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။.
အမှန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးကို အနှီးထည့်ခြင်းသည် အနည်းဆုံး ပထမအကြိမ်အနည်းငယ်တွင် စိတ်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။. ထို့ကြောင့် ဤအကြံပြုချက်များသည် သင့်အတွက် အသုံးဝင်နိုင်သည်-
အရွယ်အစားကိုစစ်ဆေးပါ။ သင်သူတို့ကိုမဝယ်မီ။ ကြီးလွန်းသော သို့မဟုတ် သေးငယ်လွန်းသော အနှီးသည် အလွန် စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်စေနိုင်သည်။
မှန်ကန်သော ထုတ်ကုန်ဖြစ်သကဲ့သို့ သေချာပါစေ။ အမျိုးအနွယ်ပေါ်မူတည်၍ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအတွက် အနှီးများ ရှိပါသည်။.
Si ကောင်းကောင်းမကိုင်ဘူး။အနှီးနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော ကြိုးတစ်မျိုးကို ဝယ်ယူရန် စဉ်းစားပါ။
ချက်ချင်းပြောင်းပါ။ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကို ညစ်ပတ်ပါစေ။ မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်သည့်အပြင်၊ သင့်ခွေးကို ညစ်ပတ်သော diaper ထဲတွင်ထားခြင်းဖြင့် အရေပြားယားယံမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အနှီးမပြောင်းခင်နှင့် ပြီးနောက် အောက်ခြေကို သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။ သေးငယ်သောစိုစွတ်သောမျက်နှာသုတ်ပုဝါ.
သူ့ကို အနှီးကို အသုံးချပါ။ သူ့ကို အနံ့ခံပြီး လက်ဆောင်တွေ ပေးတယ်။
တစ်ဦးလည်းမရှိ ခွေးအနှီးတွေဝယ်လို့ရတဲ့ အမျိုးမျိုးသောနေရာတွေ အများကြီးပါ။အထူးပြု သို့မဟုတ် အထွေထွေစတိုးဆိုင်များတွင်ဖြစ်စေ၊
ပထမဆုံးအနေနဲ့၊ ဝင်ပါ အမေဇုံ တစ်ခါသုံးကနေ လျှော်ဖွပ်နိုင်တဲ့အထိ၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားတွေအတွက်လည်း အနှီးအမျိုးအစားပေါင်းများစွာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး၊ သူတို့ရဲ့ Prime Service ကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားရင် အချိန်တိုအတွင်းမှာ အိမ်မှာ ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဤထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကိုဝယ်ရန်အသုံးအများဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုမှာ တိရစ္ဆာန်များအတွက်အွန်လိုင်းစတိုးများ Kiwoko သို့မဟုတ် TiendaAnimal ကဲ့သို့။ ၎င်းတို့တွင် အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များ ရှိရုံသာမက လိုအပ်ပါက သင့်အား အကြံပေးနိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးတော့ တစ်ချို့က တိရိစ္ဆာန်ဆရာ သူတို့မှာ အနှီးနဲ့ pads တွေရှိတယ်။ များသောအားဖြင့် ပိုစျေးကြီးသည့်နေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အကြံပေးနိုင်သည့်နေရာလည်းဖြစ်သည်။
သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ခွေးအနှီးများကို ရှာဖွေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီပေးမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ မင်းရဲ့ခွေးက သယ်သွားဖူးသလား၊ ၎င်းတို့ကို တပ်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားရန် သင့်တွင် လှည့်ကွက်များ ရှိပါသလား။ ဘယ်အနှီးအမျိုးအစားက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်လဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » အခြေအနေတိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံး ခွေးအနှီး
ခွေးများအတွက် အကောင်းဆုံး စုတ်တံများနှင့် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုနည်း
ခွေးများအတွက် အဖုံးများ ၊ ပိုနွေး မဖြစ်နိုင်